Fahafatesana ankizy teny Ivato :: Mandà raharaham-pihavanana ny fianakavian’ny maty • AoRaha
“Tsy manao raharaham-pihavanana amin’ny havanay fanahiniana novonoina izahay. Andrasanay foana ny fandehanana any amin’ny Fitsarana na rahoviana na rahoviana”, hoy ny fianakavian’ilay ankizilahy mponina eny Ivato namoy ny ainy ary hita tany amin’ny tranom-patin’ny HJRA, tamin’ny 6 jona. Nampahafantatra ny fisian’ny olona nirahina niresaka tamin’izy ireo, noho ny faniriana hanaovana raharaham-pihavanana amin’ity raharaha ity ny fianakaviana omaly.
“Aleo andeha ny Fitsarana fa inona no antony tsy hanolorana any amin’ny Fitsarana an’ireo voampanga? Izahay mahita fa niniana novonoina ny havanay. Mba hahafantarana ny marina no tokony hanolorana ny raharaha any amin’ny Fitsarana. Aleo ny Fitsarana hanao ny asany”, hoy hatrany iretsy havan’ilay ankizy niharam-boina.
Mangina hatrany manoloana an’ity tranga ity ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny Tafika. Heno kosa ny fitoriana ny ankizilahy iray isan’ireo nitaraina tamin’ny tambajotran-tserasera ho niharan’ny fampijaliana kanefa tsy namoy ny ainy. Mahatsiaro ho afa-baraka tamin’io fijoroana vavolombelona io ny miaramila ka izao voalaza fa nitory izao ihany koa. Miankina amin’ny famotorana avy amin’io fitoriana faharoa io ny fiandrasana ny fanolorana ny vokatry ny fanadihadiana eny amin’ny Fitsarana.
Fanakorontanana :: Mpiambina Filoha teo aloha nanao ampamoaka